( အသားညို၊ နွားအို့အခိုက် ) – Grab Love Story
၁ ၊ ရွှေရုပ်ကလေးကောက်ရ ၊
Golf ရိုက်ပြီးသွားတော့ ဦးအောင်တေဇ တစ်ယောက်အိမ်ပြန်ရမှာ ပျင်းပျင်းနဲ့ဘီယာလေးမျှင်းစုတ်ပြီး လမ်းကကောင်မလေးများကို မျက်စိအစာကျွေးရင်း ကားလေးကိုဖြေးဖြေးချင်းမောင်းပြန်လာခဲ့သည်။ သားနဲ့သမီး အိtမ်ထောင်ကျ အိမ်ခွဲနေကတည်းက သူနဲ့ သူ့မိန်းမဒေါ်ခင်စံပယ်နှစ်ယောက်တည်းမို့ သူကငယ်မူပြန်လို့ကောင်းနေတုန်း သြဇီက ခင်စံပယ့်အကို ကားတိုက်ပြီး ဆေးရုံတက်ရလို့ဆိုလား သြဇီထွက်သွားတာသုံးရက်ရှိပြီ။ အရင်တည်းကမျက်နှာကျောမတည့်တဲ့ယောက်ဖမို့ သူလိုက်မသွားတော့။ အဖွားကြီးသွားတဲ့နေ့တုန်းကတော့ သူ့ကိုလေဆိပ်လိုက်ပိြု့ပီး အပြန်မာဆတ်ဝင်ပြီး တစ်ကြောင်းဆွဲလိုက်သေးတယ်။ သူ့စိတ်ကြိုက် အသက်သုံးဆယ်ဝန်းကျင် ကိတ်ကိတ်ကြီးတွေမရှိဘဲ ၂၀၊ ၂၁ တစ်လောက်ခလေးမတွေသာရှိ၍ သူအာသာပြေ တစ်ကြောင်းပဲဆွဲလိုက်ပြီး ထပ်မသွားဖြစ်တော့။
အိမ်မှာနေတော့လဲပျင်းတာနဲ့ အောကားလေးကြည့်လိုက်၊ ဂွင်းထုလိုက်၊ အပြင်မှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့တော့လဲ Golf ရိုက်တာနဲနဲ ခုခေတ် ဆက်ဆီမော်ဒယ်လေးတွေအကြောင်း ပြောတာများများနဲ့မို့ ဘီယာလေးသောက်ရင်း သူကနားထောင်သူသက်သက်။ သူ့ဘော်ဒါအဘိုးကြီး သူနဲ့အကြိုက်မတူ၊ သူတို့က ငယ်ငယ်ချောချော ပြားပြားကပ်ကပ် လေးတွေကြိုက်ကြသည်။
အဲ့ဒါကြောင့် ခုလို ကားမောင်းနေရင်း ပလက်ဖောင်းပေါ်ကလမ်းလျှောက်နေတဲ့ ဣထိယအရွယ်သုံးပါးပုပုဝဝ မရွေး လမ်းလျှောက်တိုင်း တုန်ခနဲ တုန်ခနဲ ဖြစ်သွားတဲ့ ဖင်တွေလိုက်ဇိမ်ခံကြည့်ရတာကမှာ အာသာနဲနဲပြေသေးသည်။ အင်း အဖြူအစိမ်းနဲ့ ဆရာမထင်ရဲ့ ကျောင်းသားတွေကတော့ရှယ်ဘဲကွာ တင်းနေတာပဲ၊ ဟာ နာစ်မလေးထင်တယ် ဝဝတုတ်တုတ်နဲ့ ဘောင်းဘီရာလေးကိုထင်းနေတာပဲ၊ အင်း ဒီအဖွားကြီးက လူသာအသက်ကြီးတာ ဖင်မကျသေးဘူး အပျိုကြီးထင်တယ် ငါလိုငဖြုတ်နဲ့ရလို့ကတော့ ဟွန်း ဟွန်း တစ်ယောက်ပြီး တယောက်မှန်းရင်း ခုအသက်ကြီးတဲ့အထိ သူ့ဆန္ဒကိုလိုက်လျောနေဆဲဖြစ်တဲ့ သူ့မိန်းမ ခင်စံပယ်တောင်မြေးရတော့မယ် ခုထိအိုးကြီးမကျသေးတာ သတိရသွားသဖြင့် တဟဲဟဲနှင့်သဘောကျသွားတယ်။
အဲ အဲ ဒီတစ်ယောက်ကတော့မိုက်လှချည်လား chubby တောင့်တောင့်လေး နဲနဲပြုတ်နေပေမယ့် ကောင်းလိုက်တဲ့အိုးကွာ ခါးသိပ်မသေးလဲ ဖင်အိုးကြီးတွေကတောင့်သဖြင့် ထည်လွန်းတယ် အင်း အိတုန်နေတဲ့ပုံကြည့်ရတာတော့ ကလေးအမေထင်တယ်။ အနောက်ကနေ ကြည့်ကောင်းကောင်းနှင့်ကြည့်ရင်း အနည်းငယ်ကျော်သွားတော့ ရုပ်လေးပါကြည့်ရအောင် ဘက်မှန်ကနေလှမ်းကြည့်တော့မှ မြင်ဖူးသလိုရှိသဖြင့် ကားကိုလမ်းဘေးကပ်ရပ်ရင်း စဉ်စားနေတုန်း မိန်းခလေးကခေါင်းငိုက်စိုက်သူ့ဘေးကအဖြတ်မှ ရုတ်တရက်သတိရသွားပြီး
ဟဲ့ မိညို၊ မင်းရွှေမိုးညိုမဟုတ်လား
ဟာ ဆရာ အဲ ဦးအောင် ဘယ်လာတာလဲ
Golf ရိုက်ပြီး ပြန်လာတာ နင့်ကိုတွေ့လိုက်လို့ ဒါနဲ့ အထုတ်တွေအပိုးတွေနဲ့ဘယ်သွားမလို့လဲ
(နဂိုမဲ့နေတဲ့မျက်နှာက ငိုတော့မလို ဖြစ်သွားပြီး ) ဟို ဟို . . . အိမ်ပြန်မလို့
သိပြီ ထုံးစံအတိုင်း ဟိုကောင် ငဇော်နဲ့ရန်ဖြစ်လာပြန်ပြီမဟုတ်လား
အင်း ငမူး မူးကောင်းတုန်းပဲလား
ဆရာ့တပည့်ကအခု အရက်တင်မကတော့ဘူး စမောကဆွဲချင်သေးတယ် လူကိုလဲပြသနာရှာတယ်
ကဲကဲ မိုးကျလာပြီ ငါ့ကားပေါ်တက် ပြန်လိုက်ပို့မယ်
ဟာ ဆရာ မပြန်ပါဘူး ခုပဲရန်ဖြစ်ပြီးအိမ်ပေါ်ကဆင်းလာတာ
ဟဲ့ မပြန်လို့ဖြစ်မလား ကလေးမဟုတ်သငယ်မဟုတ်
မပြန်ပါဘူး ဒီတခါတကယ့်ကိုကွဲမှာ ( အရင်ကကုမ္ပဏီမှာ နွဲ့ဆိုး ဆိုးနေကျစရိုက်လေး ပြန်ပေါ်လာသည်)
ကဲကဲ ခုလောလောဆယ် ကားပေါ်တက် မပြန်ချင်လဲ တခုခုသွားစားရအောင်
သူ့ကားပေါ်စွေ့ခနဲ ထိုင်ချလိုက်တဲ့ ဒေါ်ရွှေမိုးညို တင်ပါးထွားထွားကြီးတွေတချက်ခိုးကြည့်ရင်း အင်း အရင်အပျိုတုန်းကထက် ပိုထွားလာတဲ့တင်သားတွေကိုသရေယိုချီးကျူးမိသည်။ တွေ့တဲ့ယိုးဒယားဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဝင်ထိုင်တာနဲ့ ညိုညိုကသူ့စိတ်ညစ်စရာအဖြစ်တွေကိုတရှုံ့ရှုံ့နှင့် ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် နတ်သံနှောတော့သည်။ ဦးအောင်တေဇသိပ်တော့စိတ်မဝင်စားပါ ရန်ဖြစ်တဲ့တက်တဲ့ အခြားလင်မယားတွေထုံးစံအတိုင်းပါပဲ။ သို့ပေမဲ့ ရွှေမိုးညိုကလဲ ခုမှရန်ဖြစ်လာတာဆိုတော့ နားထောင်မယ့်သူတုန်းမို့ အားရပါးရပြောကာငိုသည်။ ဆိုင်ထဲမှာလဲလူရှင်းနေတုန်းမို့ ပုံခုန်းလေးကိုင်လိုက် ကျောလေးသပ်လိုက်နဲ့ချော့ရင်း ဦးအောင်တေဇ စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်လာသည်။ ကုမ္ပဏီမှာတုန်းကတည်းက ဒီကောင်မလေးတွေနဲ့ ဒီလိုပဲဖင်ပုတ်ခေါင်းပုတ်လုပ်နေကြဖြစ်သော်လည်း အခုညိုညိုနဲ့ အခြေအနေတွေက မတူဘူးမို့ ဦးအောင်တေဇ စိတ်တွေလှုပ်ရှားရသည်။
ရွှေမိုးညိုဆိုတာက ကုမ္ပဏီမှာကတည်းက အသားညိုပြာညက် နဲ့အခုလောက်မကိတ်သေးသော်လည်း ဂစ်တာရှိတ် ရေဆေးငါးကြီးမို့ သူသဘောကျတဲ့အထဲပါပေမဲ့ ဟိုပုတ်ဒီပုတ်နဲ့ပဲ အာသာဖြေခဲ့ရသည်။ အခုသူ့ယောကျားဇော်ထက်နဲ့လဲ မညားသေး၊ သူတို့ကုမ္ပဏီကလူကြီးတွေပဲ တကောင်ကြွက်ဇော်ထက်အတွက်လိုက်တောင်းပေးပြီး သူတို့မင်္ဂလာပွဲစီစဉ်ခဲ့ရတာဖြစ်သည်။ အခုမှအရမ်းကိတ်လာပြီး သူ့ယောကျာင်္ားနဲ့လဲအစဉ်မပြေဆိုတော့ ရွှေမိုးညိုကို ပိတ်သပ်ချော့နေရင်း အထိအတွေ့ကြောင့် သူလီးတောင်လာရသည်။
အောင်တေဇအစ်အောက်မေးကြည့်တော့ ဇော်ထက်အသောက်များပြီး ကျန်းမာရေးထိခိုက်နေချိန်တွင် သူ့ကိုငမ်းသည့်ဟိုကောင်နဲ့ပေးစား ဒီကောင်နဲ့ပေးစားလို့ရန်ဖြစ်ကြတာဖြစ်သည်။ ပြောပုံအရတော့ ရွှေမိုးညိုကိုယ်တိုင်လဲ ပဲနဲနဲပေးမိသည်ထင်ပါသည်။ ရွှေမိုးညိုကြည့်တော့လဲ အထန်ရုပ်ဆိုတော့ သူ့ယောင်္ကျားကျန်းမာရေးမကောင်းတုန်း ဘာရယ်မဟုတ်ပဲပေးမိတာဖြစ်မည်။
ဒါဆို နင်က ဘယ်သွားမယ်စဉ်းစားထားလဲ
ပထမတော့ အိမ်ပြန်မို့ပဲ ခုအိမ်လဲမပြန်ချင်တော့ဘူး တည်းခိုခန်းတခုခုမှာတည်းမလားလို့
ဟာ ဖြစ်မလားဟ နင်ကလဲ ကဲဒီလိုလုပ် ငဇော့်လဲစိတ်မပူရအောင် ခုလောလောဆယ် ငါ့အိမ်မှာလိုက်နေ နောက်တော့ငါစီစဉ်ပေးမယ် ဟုတ်ပြီလား
ဟေး တကယ်နော် ဦးအောင်၊ တကယ်အိမ်ပြန်မပို့ဘူးနော်
အေးပါဟာ ခုလောလောဆယ်တော့ ငါ့မိန်းမလဲ သြဇီသွာနေတော့ ငါတစ်ယောက်ထဲပျင်းနေတာ
တော်သေးတာပေါ့ ဦးအောင်နဲ့တွေ့တာ မဟုတ်ရင် တည်းခိုခန်းသွားရတော့မှာ
အင်း ဒီဘော်ဒီကြီးနဲ့သာတည်းခိုခန်းသွားတည်းရင် တစစီလိုက်ကောက်ရမယ်မိညိုရေ ငါပြောလိုက်ရ
ဟ ဟ ဦးအောင်ကလဲ သူများဘော်ဒီကဘာဖြစ်နေလို့လဲ ဦးအောင်နော်
ဘာဦးအောင်နော်လဲ နင်တို့လဲ ငါမတွေ့ရတဲ့ သုံးနှစ်အတွင်းဘယ်လောက်တောင်သောင်းကျန်းထားလဲမသိဘူး ထွားလာလိုက်တာ ဟွန်း ဟွန်း ကဲ မြန်မြန်စား မိုးတိတ်တုန်းအိမ်ပြန်ရအောင်
၂ ၊ မသိစိတ်ရဲ့တန်ခိုး ၊
တကယ်တော့ ဦးအောင်တေဇ ရွှေမိုးညိုကိုခေါ်လာတာဘာအကြံအစည်မှမပါ၊ ခင်စံပယ်မရှိတုန်း သူသဘောကျတဲ့ တပည့်အကိတ်တစ်ယောက်နဲ့နီးနီးနားနားနေပြီး ရသေ့စိတ်ဖြေ ဟီးဟီးဟားဟား ဖင်လေးပုတ် ကျောလေးသပ် သဘောမျိုးသာ ရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်း ရွှေမိုးညိုတကယ်ရောက်လာတော့ သူ့ဆန္ဒတွေကို သိက္ခာဖြင့်မနည်းထိမ်းနေရသည်။ ဥပမာ အိမ်ကိုရောက်ရောက်ချင်းရေမိုးချိုးပြီး လှမ်းထားတဲ့ ဘရာဇီယာတွေ၊ သူတို့ကွန်ဒိုခန်းမှာ အဝတ်လှမ်းသည့်အခန်းကမီးဖိုဘက်မှာ သူရေသောက်နေတုန်း ရေချိုးခန်းကထွက်လာတဲ့ ဒေါ်ရွှေမိုးညို ဘရာလှမ်းနေတာကိုကြည့်ရင်းမဒိန်းကျင့်ချင်စိတ်ကို မနည်းဖျောက်နေရသည်၊ မကြည့်ဘဲလဲ မနေနိုင်ပါ။
ရေချိုးခန်းထဲက တဘက်ရင်လျားဖြင့်ထွက်လာကတည်းက နဂိုထက်ထွားလာသည့်ရင်ညွှန့် ညိုစိမ့်တွေက မကြည့်လဲမြင်ရသည်။ အဲ့အပြင် ပြည့်ဖြိုးနေတဲ့ ပေါင်သားဝါဖန့်ဖန့်၊ အအိုဖြစ်လို့လှုပ်ရှားလိုက်တိုင်း တုန်သွားတဲ့ တင်သားစိုင်တွေ၊ ဘရာကိုလှမ်းချိတ်နေပုံက သူ့စိတ်တွေဝရုန်းသုံးကားဖြစ်စေပြီး သူ့ညီငထန်ကိုလဲ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်စေသည်မို့ ရွှေမိုးညို အိပ်ခန်းထဲဝင်သွားသည်အထိ သမာဓိရှိုးလေးတော့ရှိုးမိသည်။
ရွှေမိုးညိုကလည်း သူ့ဘော်ဒီကိုယောင်္ကျားတွေအာသာငန်းငန်းလိုက်ကြည့်လျှင်အလွန် အရည်လိုက်သည့်မိန်းမ၊ ဇော်ထက်တုန်းကလဲ အဲ့လို နှာဘူးမျက်လုံးကြီးတွေကြောင့်ယူဖြစ်လိုက်တာ။ တော်ပြီ သူ့ကိုလိုက်ငမ်းတဲ့သူတွေ့တိုင်း ပေးစားပြသနာရှာပြီး သူကိုတိုင်ကမှတကယ် စမောဆွဲချင်နေတဲ့ယောင်္ကျားအကြောင်းမတွေးလိုတော့။ အခု ကုမ္ပဏီကထွက်သွားတဲ့ စီပွားရေးအကြံပေး ဆရာဦးအောင်တေဇနှင့်တွေ့လို့တော်သေးသည်။ ဦးအောင်ကကုမ္ပဏီမှာကတည်းက သူတို့မိန်းခလေးတွေနဲ့အဖွဲ့ကြတက်ပြီး အလွန်လဲသဘောကောင်းသည်၊ သူတို့ကဆရာလို့ခေါ်တာတောင် ဦးအောင်ဟုပဲ ခေါ်ခိုင်းတဲ့သူ။ တခြားယောင်္ကျားတွေလို သိပ်နှာဘူးထတာမျိုးမရှိပေမဲ့ သဘာဝအတိုင်း ဖင်တွေရင်တွေကိုမသိမသာငမ်းတာ ထိတာပုတ်တာလောက်တော့ သူတို့အတွက်ပြသနာမရှိ။
အဲ့ဒီတုန်းက ဦးအောင်မျက်လုံးတွေကပြသနာမဟုတ်ခဲ့ပေမဲ့ အခုဦးအောင်အကြည့်တွေကြောင့် ရွှေမိုညိုကြက်သီးထမိသည်။ သူဘရာဇီယာလှမ်းနေတုန်း တုန်သွားတဲ့သူ့ဖင်ကြီးကိုငေးကြည့်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေက အရောင်တောက်လွန်းလှသည်။ ဦးအောင်ပြောသလိုပဲ ဇော်ထက်သောင်းကျန်းလိုက်တာ အရင်ကတင်းတင်းရင်းရင်းရှိတဲ့အသားစိုင်တွေ လျော့ရဲပြီး လှုပ်ရှားလိုက်တိုင်း ယမ်းခါနေတော့ ကြည့်တဲ့သူတွေအရသာရှိသည်ပေ့ါ။
သူမကိုတိုင်ကလဲ အပျိုတည်းက သူ့အသားဆိုင်တွေကို အသာငမ်းငမ်းလိုက်ကြည့်ရင် စိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီး အရည်တွေစိမ့်ရသည်။ အခုဦးအောင်ကြည့်မည်ဆိုလဲ ကြည့်ချင်စရာ၊ တဘက်ချွတ်ပြီး မှန်ထဲမှာပြန်မြင်နေရတဲ့ သူ့ခန္ဓာကိုကြီးကိုကြည့်ဦး ဘယ်ယောင်္ကျားမကြည့်ဘဲနေနိုင်မလဲလေ။ သူများမပြောနဲ့ ရွှေမိုးညိုကိုယ်တိုင်သူ့ဘာသာသူပြန်စိတ်တွေကြွလာလို့ နို့နှစ်လုံးကိုပြန်ပင့်ကိုင်ပြီး ထောင်နေတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးကို လိမ့်ချေလိုက်တော့ အရမ်းဖိလ်းတက်သွားတယ်။ တစ်အိမ်လုံးမှာ သူနဲ့ ဆရာနဲ့နှစ်ယောက်ထဲဆိုတဲ့အသိနဲ့ ဦးအောင်တေဇရဲ့အကြည့်ရိုင်းကြီးတွေရဲ့ဒဏ်၊ တစစ်စစ်နဲ့ ယားတက်တဲ့ စောက်ခေါင်း အား …… မရတော့ ကုတင်ပေါ်ဖင်တစောင်းလှဲလိုက်ပြီး လက်တစ်ဖက်က လက်တဆုတ်မက နို့ကြီးတွေကိုပင့်ကိုင် လက်ညှိုးနဲ့လက်မက နို့သိးခေါင်းလေးတွေကိုပွတ် ချေရင်း နောက်လက်တစ်ဖက်က စောက်စိလေးကို စိတ်တိုင်းကျဆော့ကစားပြီး အာသာဖြေနေမိတော့ အာရုံထဲမှာ ဆရာဦးအောင်တေဇအကြည့်ရိုင်းကြီးတွေနေရာယူလာလေသည်။
အား . . . ဆရာရယ် ရှီုး
လူစိတ်ဆိုတာကထူးခြားသည်၊ အထူးသဖြင့် လိင်စိတ်ပေါ့။ တယောက်ယောက်က ကို့ကိုမှန်းနေပြီဆိုရင် ဘာမှန်းမသိအလိုလို လိင်စိတ်ကြွလာတာမျိုး။ အခုလဲ ဦးအောင်တေဇ အကြည့်တွေ စိတ်ရိုင်းတွေကြောင့် ဦးအောင်တေဇကို မှန်းပြီးပွတ်နေတဲိ့အချိန် ဦးအောင်တေဇလဲ ခုနကတွေ့လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းတွေရော ခုနကရွှေမိုးညိုလှမ်းသွားတဲ့ ဆိုဒ်ကြီးဘရာဇီယာလေးကိုကြည့်ပြီး အရမ်းကိုထန်လာလို့ သူ့လီးကြီးက အောက်ခံဘောင်းဘီကွဲလုမတက်ကို ထောင်လာ၏။ ရွှေမိုးညို ဘရာကြီးကို အားမလိုအားမရတချက်ညှစ်လိုက်ပြီး ဘယ်လိုမှစိတ်မထိန်းနိုင်တာနဲ့ အနီးကခုနရွှေမိုးညိုရေချိုးသွားတဲ့ ရေချိုးခန်းထဲဝင်ပြီး အမြန်ထုမှရတော့မယ်။
ခုနကဒီအခန်းထဲမှာ ညိုညိုတစ်ယောက်တည်း တုံးလုံးကြီး အား . . . .ညိုညို့အငွေ့အသက်တွေနဲ့ ပူနွေးနေတုန်းပဲ မျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီး ပုံဖော်တယ် ဖုထစ်နေတဲ့ ကောက်ကြောင်းတွေနဲ့ ညိုညို ရှီုး . . ဖင်တုံးကြီးတွေက ထွားလာလိုက်တာမိညိုရယ် ဟိုကောင်ငဇော် ဘယ်လိုတွေတောင်လိုးလွှတ်လိုက်လဲမသိ အား . . . ရေချိုးခန်းနံရံကိုကျောမီ ခါးကိုကော့ မျက်လုံးတွေမှိတ်ပြီး ငယ်ငယ်ကလိုအသကုန်ထုနေတာ သူ့လီးကြီးကလဲ ငယ်မူငယ်သွေးတွေပြန်ထကြွပြီး အစွမ်းကုန်ထောင်လို့ သူတောင်အံ့သြရတယ်။ ကောင်းလိုက်တာ မိညိုရယ် . . . မင်းဖင်ကြားထဲ လီးကြီးညှပ်ထည့်ထားချင်တာ အာ . . . . . .
ရွှေမိုးညိုမထင်မှတ်ဘဲဦးအောင်တေဇကိုမှန်းပွတ်မိတာ အသစ်အဆန်းမို့အရမ်းထန်ပြီး မြန်မြန်ပီးသွားတယ်၊ သူလဲရှက်ပြုံးလေးနဲ့ တဘတ်ပြန်ပတ်ပြီးရေဆေးဖို့ထွက်အလာ အပြင်မှာဆရာမရှိတော့။ သူ့အခန်းထဲပြန်ဝင်သွားတယ်ထင်ပြီး ရေခိုးခန်းတံခါးဖွင့်လိုက်တော့ အိုး . . . . ဦးအောင် ဝင်ပေါက်ကိုမျက်နှာမူ မျက်လုံးကြီးမှိတ်ပြီး ဂွင်းထုနေတာ အားကြီးနဲ့ပါလားဦးအောင်ရယ် ဘယ်သူ့ကိုမှန်းနေတာလဲဟင် အမှန်သူတံခါးဖွင့်လိုက်တုံးက အသံနဲနဲမြည်ပေမဲ့ ဆရာမသိလိုက်ဘူးမို့ အသာတံခါးကို ပြန်စေ့ပေးရင် နဲနဲလေးခိုးချောင်းမိသည်။
ဆရာက အသက် ၄၅၊ ၅၀ လောက်လို့ခန့်မှန်းမိပေမဲ့ အခြားရွယ်တူတွေလို ဗိုက်ပူကြီးမဟုတ်။ ကြည့်ပါဦး လီးကလဲ လူငယ်လူရွယ်လေးကျနေတာပဲ သန်မာတောင့်တင်းနေလိုက်တာ အားရစရာကြီး။ သူ့ကိုခုနကငမ်းသွားတာဆိုတော့ သူ့ကိုမှန်းနေတာများလား . . . ဂွင်းတိုက်နေတာလဲ အားရပါးရနိုင်လှသည်။ ဖြစ်နိုင်သည် တံခါးတောင်မပိတ်နိုင် သူ့ကိုကြည့်ပြီးထန်သွားတာဖြစ်နိုင်သည်။
အဲ့လိုတွေးမိတော့ စောက်ဖုတ်ထဲက စစ်ခနဲအရည်ထွက်လာပြီး စောက်ခေါင်းထဲက လှိုက်လှိုက်ပြီးယားလာတော့သည်။ သူမနေနိုင်လျှင်ရေချိုးခန်းတံခါးဆွဲဖွင့်ပြီး ဆရာ့လီးပြေးစုတ်မိမှာ စိုးလို့ အခန်းထဲအသာလှည့်ပြန်ခဲ့ပြီး လတ်တလောမြင်ခဲ့တဲ့ ဦးအောင်လီးကြီးကိုပြန်မှန်းမိတော့သည်။
၃ ၊ နအိုပေါင်ကျိုး ၊
ညနေစောင်းအောင်တေဇ ကော်ဖီသောက်ဖို့ အခန်းထဲကထွက်လာတော့ မီးဖိုထဲမှာ ဟင်းချက်နေတဲ့ ရွှေမိုးညိုကိုတွေ့လိုက်တယ်။ အိမ်နေရင်းမို့ထင်သည် တီရုပ်ပွပွနှင့် ဘောင်းဘီတိုလေးနှင့် အရမ်းကြည့်ကောင်းနေသည်။
ဟာ ဦးအောင် နှိုးပြီလား ဟဲ ညိုလဲဗိုက်ဆာတာနဲ့ ရှိတာလေးတွေစားရအောင်လုပ်နေတာ
ကောင်းတာပေါ့ဟ ငါတစ်ယောက်တည်းဆို ခေါက်ဆွဲပြုတ်သောက်နေရတာ
ခိ ခုလဲခေါက်ဆွဲပြုတ်ပဲဆရာ ဟီးဟီး
အေး ကောင်းရော ခုတော့ကော်ဖီသောက်လိုက်ဦးမယ်
ရပါတယ်ဟာ ငါလုပ်ပါ့မယ် နင်က ညစာ ခေါက်ဆွဲရှယ်ပြုတ်
ပြောပြောဆိုဆို အောင်တေဇမီးဖိုထဲကော်ဖီဝင်ဖျော်တော့ မီးဖိုကကျယ်သင့်သလောက်ကျယ်ပေမဲ့ ရွှေမိုးညိုနှင့်နှစ်ယောက်သားမို့ ထိမိ တိုက်မိသည်။ အိမ်နေရင်ညနေစောင်းမို့ အောင်တေဇကလဲ ချည်သားဘောင်းဘီအရှည်နဲ့ အောက်ခံဘောင်းဘီမဝတ်မိ။ အခုဘာရယ်မဟုတ် မိညိုဖင်တွေနဲ့ နဲနဲလေးတိုက်မိ ပွတ်မိတာနဲ့တင် တင်းရင်းလာလို့ အိနြေ္ဒ ပြန်ဆယ်နေရသည်။ ရွှေမိုးညိုလဲ သူ့ဖင်သားလေးကို ပါးပါးလေးပွတ်မိသွားတာနဲ့ ချက်ချင်တင်းလာတဲ့ဆရာ့အချောင်းကြီးကြောင့် အပျိုလေးလိုရင်ခုန်လာရသည်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လဲ အဓိပ္ပါယ်ဖော်ရခက်တဲ့ ရမက်မျက်လုံးတွေနဲ့ အကြည့်ချင်းဆုံသည်။ တယောက်လိုအပ်ချက်ကိုတယောက်သိနေသလိုလို။
သူတို့နှစ်ဦးရဲ့ အခြေအနေက သံလိုက်တုံးနှစ်ခု ဆွဲမကပ်ခင်အနေအထား၊ ဆွဲမကပ်မိအောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ထိန်းရင်း အတင်းရုန်းနေမိသလို။ ဆက်ထိမိ တိုက်မိနေလျှင် သူ့လီးကြီးတောင်လာတော့မှာမို့ ကော်ဖီစက်ကိုအမြန်ပိတ်၊ ကော်ဖီခွက်ယူခါ စားပွဲမှာပြန်လာထိုင်ပြီး ရောက်တက်ရာရာစကားတွေပြောနေမိသည်။ အောင်တေဇကုမ္ပဏီကနေအနားယူသွားပြီး သူတို့မတွေ့ရတဲ့အချိန်ကအကြောင်းတွေလျှောက်ပြောနေပေမဲ့ နှစ်ယောက်လုံးစိတ်ဝင်တစားမရှိလှ၊ အောင်တေဇက ကိုယ့်တပည့်ယောင်္ကျားနဲ့အဆင်မပြေချိန်မှာ သူအခွင့်အရေးယူသလိုမဖြစ်ချင်။ သဘောမတူလျှင် အရှက်တကွဲဖြစ်မည်မို့ စဉ်းစားဆင်ခြင်ရသည် ။ ရွှေမိုးညိုကတော့ငယ်ငယ်ကရှုပ်တာမှန်ပေမဲ့ လင်ယူပြီးတော့မရှုပ်ချင် အခုယောင်္ကျားနဲ့ရန်ဖြစ်ဆင်းလာပြီး သူ့ကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့လူက သူ့ဆရာဖြစ်နေလို့ ရှိန်နေခြင်းသာ၊ နေလည်က မြင်လိုက်တဲ့မြင်ကွင်းကတော့ အသဲယားရင်ခုန်စေတာအမှန်ဖြစ်သည်။
ညဘက် ထုံးစံအတိုင်း ဦးအောင်တေဇက တီဗွီရှေ့ရင်းဘီယာဖွင့်သောက်တော့ ညိုညိုက ဦးအောင်ကိုနှိပ်ပေးမယ်ဆိုတာ သူ့ပုခုန်းတွေကို အတင်းနှိပ်သည်။ တချက် အောင်တေဇစကားလှည့်ပြောတာနဲ့ ညိုညိုသတိမထားမိတာနဲ့ကြုံပြီး သူ့နို့အုံနဲ့ဆရာ့ နားထင်နဲနဲတိုက်မိမလိုဖြစ်သွားတာနဲ့ ဆရာကအနောက်မလှည့်မိအောင် တောင့်တောင့်ကြီးဖြစ်သွားပြီး ဘောင်းဘီဂွကြားမှာလဲ ဖောင်းဖောင်းကြီးဖြစ်လာတာမြင်နေရတော့ သူ့ကိုသူပီတိဖြစ်ပြီး ဦးအောင်ကိုစချင်လာသည်။ အဲ့ဒါကြောင့် TV remote ယူသလို့ဘာလိုလိုနဲ့ ဆရာ့ကျောကုန်းကိုသူ့နို့နဲ့ဖိပေးလိုက်တော့ ဆရာတော်တော်နေရခက်နေပုံပေါက်တယ် အဟိ။
နှစ်ခါလောက်တိုက်မိတော့ လီးအရမ်းမတောင်အောင်မနဲထိန်းနေရတာမို့ အောင်တေဇနဲနဲတင်းလာတယ်၊ သူကရှောင်ပေးနေပါလျှက် အတင်းလာတိုးနေတာလားဟုပင်အတွေရှိုင်းတွေဝင်လာသည်။ ဘီယာကလဲကုန်တော့မှာဆိုတော့
ကဲ ကဲ တော်ပြီ ညိုညိုရေ ကြာရင် နင့်ပေါက်စီငါကိုက်စားမိတော့မယ်
အာ ဆရာကလဲ မတော်တဆပါနော် ခ်ခ် ( အဲ့လိုပြောတော့မိညိုရှက်သေးသည်)
အေး နင့်ဟာကလဲ မနည်းကြီးလာတယ်ဆိုတော့ ရှောင်မလွတ်ဖြစ်နေတာ
ဟီး ဟီး ဆရာကလဲ ညိုဝလာလို့ပါ အရမ်းဝလာတာသိလား
ဟား ဟား ငါက လက်ယောင်လိုက်တာလားလို့
သူ့ဘီယာကုန်သွားလို့ ဗူးကိုညှစ်လိုက်တော့ သူသွားယူပေးမယ်ဆိုပြီးမီးဖိုဘက်လျှောက်သွားတဲ့ ညိုညိုဖင်တွေကြောင့် ထကြွလာတဲ့သူ့လီးကိုအရမ်းထိန်းမထားချင်တော့၊ သူ့အတွက်ဘီယာယူလာရင်း
ဦးအောင် သမီးလဲသောက်ချင်တယ် (အင်း လက်ရှိဘီယာနည်းနေတာသူသိတော့)
အဲ့ဒါဆို ငါ့ကိုဝီစကီပဲပေးတော့ အဲ့ဒါနင်သောက်လိုက်
သူ့ကိုဝီစကီစပ်ပေးပြီး တီဗီရှေ့နှစ်ယောက်သားစကားတွေပြောမိသည်။ များသောအားဖြင့်တော့ အိမ်ထောင်ရေး ဆက်ခ် အကြောင်းတွေ၊ ပုံမှန်မိန်းခလေးတွေအကြိုက် စကားပြောတက်သော အောင်တေဇတစ်ယောက် အရက်ဝင်တော့ မိန်းမတွေရဲ့အလှနဲ့ ရွှေမိုးညိုကိုတင်စားပြောမိတာတွေ အော်တိုပါလာသည်။ ဦးအောင်နော် ဦးအောင်နော်နှင့်သူ့လက်မောင်ကို ပုတ်ပုတ်ပြောနေတဲ့ ညိုထွားလေးရွှေမိုးညို၊ သူ့ရှေ့မှထိုင်နေတဲ့ပုံကလဲ ဘောင်းဘီတိုထဲက ပေါင်တံတုတ်တုတ်ကြီးက ဝင်းလို့။ သူသိပ်မထိန်းတော့တာမို့ ငေါငေါလေးထွက်နေတဲ့သူ့ဘောင်းဘီပေါင်ကြားကို ခိုးခိုးကြည့်တဲ့ကောင်မလေး . . .
ငဇော်က နင့်ကိုသဝန်တိုမှာပေါ့ဟ နင့်ပုံစံကလဲ သဝန်တိုစရာကြီးကို
ဦးအောင်ကလဲ ညိုဝလာတာပါဆို ဝတာကိုကြိုက်ကြလို့လား
နင်က လူဝမလာဘဲ ပေါက်ဆီတွေ ဖင်တွေပဲကိတ်လာတာကိုး ငါတောင် အဲ
ခိခိ ဦးအောင်နော် ဘာဖြစ်လဲဆက်ပြော
အေးဟေ့ ငါတောင်ခုနက နောက်တခါဆို နင်ပေါက်ဆီကိုက်စားမိတော့မလို့
အာ ဦး အောင် က လဲ ဘီယာထပ်သွားယူဦးမယ်
မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေရာက စသလိုနောက်သလိုနဲ့ပြောနေရင်း ပြန်ကြည့်နေတဲ့ညိုညိုကိုဖီးဖြစ်လာလို့ ပြောရင်း သူ့လက်မောင်းကြီးကိုညစ်ပြီးပြောမိတာ့ ရှက်သလိုအမူအယာနဲ့ ထပြေးတယ်။ ညိုညိုမတ်တက်ရပ်လိုက်တာ့ သူ့မျက်နှာနဲ့ ညိုညို့ဖင်ကြီး တတန်းတည်းဖြစ်ပြီး တုန်သွားတဲ့ နှစ်စက္ကန့်လောက်အတွင်း သူလုံးဝ out of control ဖြစ်သွားသည်။
နောက်ကနေထပြီးညိုညိုကိုဖက် ဆိုဖာပေါ်ပြန်ဆွဲချ သူ့ဆံပင်တွေကြားကနေ နားရွက်လေးကိုနမ်းမိသည်။ အိုး ဦးအောင်နော် . . . ရုတ်တရက်မို့မျက်လုံးလေးပြူးပြီးလှည့်ကြည့်တဲ့ကောင်မလေး နှုတ်ခမ်းကိုဖမ်းနမ်းလိုက်တယ်။ ဒီအချိန်မှာ နှစ်ယောက်လုံး အချိန်ရပ်လို့မှီသေးပေမယ့် သူတို့မရပ်ချင်တော့။ ကြောင်တောင်တောင်လေးငေးနေတဲ့ရွှေမိုးညိုတစ်ယောက် အနမ်းတုံပြန်လာလို့ ဦးအောင်တေဇစိတ်ဘရိတ်ပေါက်သွားတော့သည်။
နုထွေးထွေးနှုတ်ခမ်းတွေကို အရသာခံနဲ့အားမရတော့တဲ့ ဆရာ့လက်တွေက သူ့တစ်နေ့လုံးအာရုံကျနေတဲ့ ဖင်သားကားကားကြီးကိုအားရပါးရနယ်တော့တာပဲ။ ပြီးတော့ နို့တေလဲချန်မထား၊ အနမ်းတွေပြင်းလာတာနဲ့အမျှ တစ်ယောက်မျက်လုံးကိုတစ်ယောက်မကြည့်မိအောင်လွှဲပြီး အောင်တေဇက နှုတ်ခမ်းတွေနမ်းနေရာက ညိုညိုမျက်မှာတပြင်လုံးကိုနမ်းတယ်။
အွန်း. . . အဟာ ဆရာရယ်
ဦးအောင်တေဇဟာ ဒီဇယ်လိုအထနှေးရင်နှေးမယ် ဘာပြီးဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာတော့ လေ့ကျင့်သားပြည့်ဝပြီးဖြစ်သည်နှင့်အမျှ သူ့အပေါ်မှေက်လျက်လေးဖြစ်နေတဲ့ ဝဝပုပုကိတ်ကိတ်ကောင်မလေးကို စွေ့ခနဲကောက်မပြီး သူနဲ့နေရာခြင်လဲပြီး အပေါ်ကနေစိတ်ကြိုက်နမ်းတယ်။ မျက်လုံးလေးပြူပြီး သူလုပ်သမျှငြိမ်ခံနေတဲ့ ညိုညို့နှုတ်ခမ်းဖူးလေးကိုငုံစုတ်လိုက်ပြီး လက်ကလဲနို့နှစ်လုံးကိုအသာနှိုက်ကာအသာလေးပွတ်ချေပေးလိုက်တော့ သူ့ယောင်္ကျားလက်တစ်ဆုပ်ပင်မက အိုး နို့သီးခေါင်းလေးတွေကလဲထောင်လို့။ အိုး နမ်းတက်လိုက်တဲ့ဦးအောင်၊ အင်း . . . ပြီးတော့ တီရှပ်ပွပွလေးနဲ့ဘရာကိုလှန်တင်ပြီး ထောင်ထနေတဲ့နို့ကိုစို့ပေးလိုက်တယ်။ နို့သီးခေါင်းလေးကိုဖွဖွလေးစို့တဲ့အပြင်စူကြွနေတဲ့ ကြက်သီးဖုလေးတွေနဲ့မာတောင်နေတဲ့နို့သီးခေါင်းလေးတွေကို မနာအောင်သွားနဲ့ဖွဖွလေးခြစ်ပေးတော့ . . . အား . . ရှီုး . . . အိုး အသဲခိုက်ရသည်။
ဒါမျိုးတွေကြုံဖူးပေမဲ့ အတွေ့အကြုံသစ်မို့ရွှေမိုးညိုအပျိုလေးတစ်ယောက်လိုရင်ခုန်လာသည်။ နဂိုကတည်းကစိတ်လှုပ်ရှားပြီး စူကြွနေတဲ့နို့သီခေါင်းညိုလေးတွေကို ဆရာစို့ပေးလိုက်တော့ အရမ်းကိုထန်လာရသည်။ အာ.စ် ဦးအောင် . . . ရယ် . . . အောင်တေဇလက်ရဲသလိုလုပ်နေပေမဲ့ ရွှေမိုးညို ရောက်စေချင်သည့်နေရာမရောက်သေး၊ မိညိုစောက်ဖုတ်က မတရားကိုယားလတာ တစ်ခုခုသွင်းလိုက်စေချင်ပြီ၊ မသိစိတ်တွန်းအားကြောင့် အပေါ်မှာမိုးထားတဲ့ ဦးအောင်တေဇကိုအောက်ကနေဖက်ခွပြီး ကော့ပေးနေမိတာ သူ့ကိုသူမသိ။
ကြွလာတဲ့ဖင်သားကြီးကိုတချက်ညှစ်လိုက်ပြီး မိညိုဘောင်းဘီတိုလေးကိုဆွဲချွတ်လိုက်တော့ အောက်ခံဘောင်းဘီအမဲလေးသာကျန်တော့တဲ့ ညိုညို့ ဖောင်ကားနေတဲ့ ပျားရည်အိုင်လေးအလှကို အောင်တေဇသဘောကျသွားသည်။ ပျားရည်ယက်ချင်နေသော်လည်း အခုအချိန်မရှိတော့။ ၁စက္ကန့်လောက်ငေးနေတဲ့ ဆရာ့ကို ရှက်လာသလိုဖြစ်လာလို့အတင်းဖက်ကပ်ထားပေမဲ့ အောင်တေဇက အမြန်သူ့ဘောင်းဘီကိုဆွဲချွတ်ပြီး ၉၀ဒီကရီထောင်မတ်နေတဲ့သူ့လီးကြီးနဲ့ ပင်တီအမဲပေါ်ကနေ စောက်ခေါင်းလေးအတိုင်းမှန်းဆွဲလိုက်တယ်။ အင် ဦးအောင်ရယ် အနက်ရောင်ပင်တီလေးက ကောက်ညှင်းထုတ်မှာချည်ထားတဲ့နှီးစလို တင်းရင်းအိထွက်လို့။
အချိန်မရလို့ အားမလိုအားမရဇထွေးမြိုချပြီး ပင်တီဂွကြားလေးကိုဘေးတွန်းဖယ်လိုက်တော့ ညိုဝင်းနေတဲ့ စောက်နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေလှလှလေးထွက်လာတယ်။ လူက တအီအီတအာအာနဲ့၊
ဆီးခုံပေါ်မှာ ညှပ်ထားတဲ့အမွှေးတွေပြန်ပေါက်လာတဲ့ပုံ။ အသည်းယားလာလို့ တစ်ချက်ဖမ်းနမ်းပြီး လီးထိပ်နဲ့ စောက်ခေါင်းဝထဲသွင်းလိုက်သည်။
အိုး . . . ဦးအောင်ရယ် ဟယ် အ အ ဦး . . အောင် . . ဖြေးဖြေးနော် အင်း . . . ရှီုး
အရည်တွေရွှဲနေပေမဲ့ ဒစ်လေးမြုတ်ရုံတောင် ကျပ် ညှပ် နေလို့ အောင်တေဇအရမ်းကျေနပ်သွားတယ်။ မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးသူလီးဒဏ်ကိုခံစားနေတဲ့မိညိုနှုတ်ခမ်းကိုလက်နဲ့ပွတ်သပ်ပြီး လီးကိုလဲတစ်ထစ်ခြင်းဆက်သွင်းတယ်၊ တဝက်လောက်မှာပြန်ထုတ်ပြီး အဆုံးထိဖြေးဖြေးလိုးသွင်းလိုက်သည်။
အာ့ ဟ အား ဆရာနော် . . . ဖြေးဖြေးလုပ်ပါဆို
(မျက်လုံလေးဖွင့်လာတဲ့ညိုညိုကို စိုက်ကြည့်ပြီး) လှလိုက်တာခလေးရယ် ဆရာမထိန်းနိုင်လို့ လိုးတော့မယ်နော် . . .
အင်း . . . ဟင်း . . အင်း . . . ရှီုး
လက်ခံနေတာသေချာပြီးမို့ အဖြေမစောင့်တော့၊ အဆုံးလိုးတော့သည်။ မိညိုစောက်ဖုတ်ညိုညိုစေးစေးလေးထဲကို သူ့လီးဖြူဖြူကြီးလိုးပြီး ပြန်ဆွဲထုတ်လိုက်တိုင်း ညိုညိုအတွင်းသားတွေစေးကပ်ပြီးပြန်ထွက်ကာ သူ့လီးကိုအထဲပြန်စုပ်သွင်းနေတာ ကြည့်လို့ပင်ကောင်းသေးတော့။ ဖြူရွှဲ ညိုစီးဆိုတာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒီလောက်အရည်ရွှဲနေတဲ့ ရွှေမိုးညိုစောက်ဖုတ်လေးက ကျပ်ထုတ်နေသည့်အပြင် အသားလေးတွေကစေးလွန်းလို့ သူပြန်တောင်မထုတ်ချင်။
အား . . အား . . . ဆရာရယ် ယ် ယ အ . . အ
စွတ် စွတ် ဖတ်
ကောင်းလိုက်တာ ရွှေမိုးညိုလေးရယ် . . .
Sofa couch လေးပေါ်ခြေထောက်လေးမြှောက်ပြီးကော့ခံနေတဲ့ ရွှေမိုးညိုနို့သီးကြီးအစုံ ဆောင့်လိုးလိုက်တိုင်းတုန်တုန်သွားပုံက ကျောက်ကျောတုံးကြီးတုန်နေသလိုမို့
အောင်တေဇအားမလိုအားမရ ဖမ်းစို့ထားရသည်။ အသက်နဲ့မလိုက်အောင်ခါးကိုအလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ဆရာ့ကို အံ့သြမိသည် ဝင်လာတဲ့သူ့လီးကြီးကို အတွင်းသားတွေကအငမ်းမရဖမ်းစုတ်ထားရင်း ထွားကြိုင်းတဲ့ ဦးအောင်လီးကြီးကိုပင်ချစ်မိသည်။ တချက်တချက် သူ့သားအိမ်တွင်းပင်ဝင်လာမလို သားအိမ်ထိပ်ဝကို လီးထိတ်နဲ့ထောက်ထားပြီး ပွတ်ဆွဲလိုက်ပုံများ
အာ . . . အင်း . . . ဆရာရယ် (သူ့ပခုန်ကြီးကိုပင် လက်သဲတွေနှင့်ကုတ်မိသည်)
ဟင့်. . အင်း. . . ကောင်းလို့ (မျက်နှာလေးကိုသူ့ရင်ခွင်ထဲဖွက်ပြီးဖြေသည်)
ဖွက်ထားတဲ့သူ့ခေါင်းလေးကိုဆွဲထုတ်ပြီး ရှက်ဝဲဝဲပြုံးနေတဲ့နှုတ်ခမ်းလေးကိုအားရပါးရ ဖမ်းနမ်းရင်း အောက်လဲတဇွတ်ဇွတ်လိုးမိသည်။ အရင်ကတချက်ချင်းဇိမ်ဆွဲလိုးနေသလောက် ပြင်းထန်လာတဲ့စိတ်ကြောင့် ဇယ်ဆက်သလိုလိုးမိသည်။
အား . . ဦးအောင် . . . ညို ပီးတော့မယ် အား အ
တစစ်စစ်တုန်လာတဲ့စောက်ခေါင်းထဲကနေပီးချင်လာတော့ အရမ်းမအော်မိအောင် ဦးအောင့်ပခုန်းသားကိုခဲထားမိပြီး အောက်ကနေပြန်ကော့စောင့်ပေးနေမိသည်။ ရွှေမိုးညိုဖင်သားကြီးနဲ့ အောင်တေဇလဥရိုက်သံကပိုမြန်လာသည်။
အင်း . . . ဦးအောင်ရယ် . . . ကောင်းလိုက်တာ . . . ပီးတော့မယ်ကွာ
အာ အာ အ အ . . . ပီး . . ပီ ပီးပီ ဆောင့် ဆောင့်
ဖောင်. . . .းဖောင်း . . . ဖောင်း
သူပီးနေတဲ့အချိန်ထိ အဆောင့်မရပ်သေးလို့ အတင်းဆွဲဖက်ကပ်ပြီး ဆရာငြိမ်သွားမှ သူ့စောက်ခေါင်းထဲအပြည့်ဝင်နေတဲ့ ဆရာ့လီးကြီးကိုအားရပါးရစောက်ခေါင်းထဲကဆွဲညှစ်ပြီး အရည်တွေပန်းလိုက်သည်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ အာကသထဲပင်ရောက်သွးတယ်ထင်ရ၊ ဆရာ့နှုတ်ခမ်းကိုဆွဲစုပ်ရင်း အရသာခံနေမိသည်။
အားလုံးငြိမ်သက်သွားတော့မှ ရှက်ပြုံးလေးနဲ့ “ မကြည့်နဲ့ ကွာ အာ . . .” ရှက်နေတဲ့ရွှေမိုးညိုမျက်နှာလေးကိုလိုက်နမ်းနေမိသည်။ သူအားရပါးရပြီးလိုက်သော်လည်း စောက်ခေါင်းထဲမှ မာတောင်နေဆဲ ဦးအောင်လီးဝဝကြီးက သွေးတွေတဒုတ်ဒုတ်တိုးနေတော့သည်။ ဆရာနဲ့စိတ်ပါလက်ပါလိုးမိပေမဲ့ နဲနဲရှက်နေသေးတာမို့ မျက်နှာကိုဟိုဘက်လှည့်လိုက်တော့ အောင်တေဇက လူခြင်းခွာပေးပြီး ညိုညိုတကိုယ်လုံးကိုဆွဲလှည့်လိုက်သည်။
အို ဟို . . . ဆိုဖာခုန်ရှည်ကြီးပေါ် သူကုန်းပေးသလိုဖြစ်သွားသည်။ ဆရာ့ရှေ့မှာနဲနဲရှက်နေပေမဲ့ ဦးအောင် ပင်တီအနက်လေးကိုဆွဲချွတ်လိုက်တာနဲ့ အကျင့်ပါနေသူဆိုတော့ ခါးလေးခွက်ပြီး ဖင်ထောင်ပေးလိုက်မိသည်။ ရွှေမိုးညိုက အသားညိုပေမဲ့အတွင်းသားတွေ ဝင်းနေတာမို့ ဦးအောင်တေဇ ခိုက်ပီးရင်းခိုက်နေရသည်။ ဖင်ထောင်ပေးလိုက်တာမို့ခုနကသူလိုးခွဲထားတဲ့ စောက်ဖုတ်ညိုတိုတိုလေးက ဖင်ကြားထဲပြူးပြီးထွက်လာတော့ ဦးအောင် ကုန်းနမ်းရင်းလျှာနဲ့ယက်ပေးလိုက်တယ်။ အိုး ဦးအောင် သူ့ကိုလှည့်ဆွဲရင်းပြန်ထိုင်ချသွားမှာစိုးလို့ ပုံမပျက်အောင်ထိန်းပေးထားရသေးသည်။ အခုပဲတခါပီးထားတဲ့စောက်ဖုတ်လေးမို့ နွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ အရည်လေးတွေရွှဲနေတာ သိပ်အရသာရှိသည်။ လျှာထိပ်နဲ့စောက်စိလေးကို ဝလုံးဆွဲလိုက် အကွဲကြောင်းအလျားလိုက် ဖင်ထိယက်လိုက်
အွင်း . . . ရှီုး . . . ဦးအောင် မယက်ပါနဲ့တော့ကွာ ( သူ့ကိုအားနာလို့ငြင်းနေတာမှန်းသိပါသည် ဖင်ကြီးဖြင့် ကား ပြီး တုန်ခါနေတာ)
အား . . မယက်ပါနဲ့တော့ . . အင် . . . ညိုမနေတက်တော့လို့ လုပ်ပါတော့ . . နော်
(ခုနကလို မျက်နှချင်းဆိုင်မဟုတ်တော့ သူမျက်နှာပူစရာမလိုတော့)
ဘာလုပ်ရမှာလဲ မိညို (ညိုကျစ်နေတဲ့ ဖင်တုန်ကြီးကို တချက်ရိုက်လိုက်တော့)
အား ဟာ ဦးအောင်ကြိုက်တာလုပ်ကွာ
ကုန်းယက်နေရာက ထ ညိုညိုကိုအနောက်ဖက်လျက် နို့ကိုဆွဲလိုက်ပြီး နားနားကပ်ခါ
တကယ်ကြိုက်တာလုပ်ရမှာလား ဦးအောင်က သမီးညိုညိုကိုလိုးချင်တာ
အာ . . ဦးအောင်နော် လူကိုခုနကပဲတစ်ချီလိုးသွားပြီးတော့ ခုမှ လိုးကွာ ကဲ
ဆိုတော့ ညို့ဖင်ကြီးနောက်မှာနေရာယူပြီး စိုရွှဲနေတဲ့ပျားရည်အိုင်လေးထဲ သူ့လီးကြီးကိုပြန်နှစ်လိုက်ရင်း ဖြေးဖြေးချင်းလိုးတော့တယ်။ ဒီနေရာမှာ စာရေးဆရာမမှတ်မိတော့ပေမဲ့ သူသုံးသွားတဲ့အသုံးသိပ်မှန်တယ် တကယ့်ကိုပျားရည်အိုင်လေးပဲ။ ရွှဲတယ် စေးတယ် ပြန်ထုတ်လိုက်တိုင်း ညောင်စေးကျတယ်။ နှစ်ယောက်သားအရှက်ကုန်လာပြီမို့ လိုးရတာပိုကောင်းလာသည်။ အနောက်ကခွေးလိုးလိုးတော့ စောင့်ချက်တွေက ပိုထိသည်မို့ ညိုညိုတစ်ယောက် ဦးအောင်စောင့်ချက်တွေကို အသဲခိုက်နေရသည်။ လီးကို ဒစ်လောက်ထိဆွဲထုတ် ခါးအားနဲ့ပြန်စောင့်ထည့်လိုက် လက်ကလဲ ခါးသိမ်လေးကနေ အောက်ဖက်ကားနေတဲ့ဖင်သားကြီးတွေကို ပွတ်လိုက် ရိုက်လိုက်နဲ့ တခါတခါ ဦးအောင်လက်ချောင်းတုတ်တုတ်ကြီးတွေနဲ့ စောက်ဖုတ်ကိုလာနှိုက်ပြီးအရည်လူးလိုက် ဖင်ဝလေးကိုလာထိုးလိုက်နဲ့ အသည်းတွေယားပြီး စောက်ခေါင်းထဲက လှိုက်လှိုက်ယားတက်လာသည်။ အား . . အား . . ပီးချင်လာပြန်ပြီဦးအောင်ရယ် . . . အား . . . ပီးပီ ပီးပြန်ပီ . . ကွာ အာ . . အ
သူ့လီးပူခနဲဖြစ်သွားတာမို့ ညိုညိုပီးသွားမှန်းသိတော့ သူအရှိန်လျှော့ပြီး ညိုညိုကိုပေးပီးထားလိုက်တယ်။ အတွင်းကဆွဲစုတ်တဲ့ဒဏ်ကြောင့်သူလဲပီးချင်လာလို့ အတင်းအောင့်ထားပြီး ညိုညိုငြိမ်သွားမှာ အားထည့်ပြန်လိုးရင်း ခနကြာတော့ သူပီးချင်လာသည်။ အရှိန်အရမ်းကောင်းနေပေမဲ့သူသိသည် အထဲမှာပီးလိုက်လို့မကောင်း၊ သူ့လီးကိုဆွဲထုတ်ပြီး ညိုညိုကိုဆွဲလှည့်လိုက်ပြီး သူ့နို့တွေပေါ်မှာပီးဖို့ဂွင်းထုတယ်။
ရွှေမိုးညိုလဲသူ့ကိုအိစိမ့်သွားအောင်လိုးပေးထားတဲ့ လီးကြီးအကူအညီလိုနေပြီမှန်းသိလို့ ဖျက်ခနဲ့ ဆွဲစုပ်ပေးလိုက်သည်။ အား . . . ညိုညို့နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးထဲသူ့လီးကြီးဝင်သွားတော့ အားစ်ကောင်းလိုက်တာရွှေမိုးညိုရယ် . . .
ရွှေမိုးညိုကလဲ ဦးအောင့်ဒစ်ကြီးကိုလျှာနဲ့ဝိုက်လိုက် လီးတစ်ခေါင်းလုံးဝင်အောင်စုတ်လိုက်နဲ့။
သူထွက်ခါနီးတော့ ပါးစပ်ထဲကဆွဲထုတ်ပြီး ရွှေမိုးညိုနို့တွေပေါ်ပန်းလိုက်တာ လရည်တွေအများကြီးမို့